Turkish Airline oo la sheegay in ay Ogayd Qaraxii lagu Xiray Daallo – Radio Daljir
Febraayo 6, 2016 6:27 b 0
Sabti, Feberaayo 06, 2016 (Daljir) —Agaasimaha Fulinta ee Shirkadda Diyaaradaha Daallo Airlines, Maxamed Ibraahim Yaasiin oo Wareysi Khaas ah siiyey Wakaalladda Wararka ee AP ayaa ku eedeeyey Shirkadda Turkish Airlines inay ka gaabiyeen inay Daallo Airlines la wadaagaan Xogaha dhinaca Ammaanka ee ku aadanaa inay hakiyeen Duullimaad ay ku imaan lahaayeen magaalladda Muqdisho.
Waxa uu tilmaamay in Turkish Airlines go’aansadeen inay joojiyaan Labo Duullimaad o oay ku imaan lahaayeen Muqdisho, taasi beddelkeedana ay Daallo Airlines ku soo wareejiyeen Rakaabkii ka baaqday Duullimaadka Turkish Airles.
Mas’uulka ugu sarreeya Maamulka Shirkadda Daallo Airlines oo isagoo ku sugan magaalladda Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta la hadlay Wakaalladda Wararka ee AP waxa uu carrabka ku dhuftay in laaga yaabo in go’aanka Turkish Airlines u soo wareejisay Rakaabkaasi ahayd iyagoo helay Warar dhinaca Sirdoonka oo ku aadan Cabsi dhinaca Ammaanka “a possible security threat”.
“Waan og nahay, waana taqaanaa, Turkish Airlines waxa heleen nooc digniin dhinaca Ammaanka, balse, aysan la wadaagin una soo gudbinin Daallo Airlines,” ayuu yiri Agaasimaha Fulinta ee Shirkadda Diyaaradaha Daallo Airlines, Maxamed Ibraahim Yaasiin.
Waxa uu intaasi ku daray inaysan caadi ahayn in wargelin kooban lagu joojin karo Duullimaadyada imaanaya ama kuwa ka baxayo Garoonka Aadan Cadde ee magaalladda Muqdisho.
Mas’uulkaasi waxa uu tilmaamay inay Shirkadda Daallo Airlines si KMG u hakinayaan Duullimaadyaddii ay ku imaan jireen magaalladda Muqdisho, sababo la xiriira qarixii maalintii Talaadadii hore ka dhacay gudaha Diyaaradda Daallo Airlines.
Dhinaca kale, Afhayeenka Shirkadda Turkish Airlines, Yaxya Ustun ayaa ku dooday inaysan jirin Duullimaadyo ay u joojiyeen sababo dhinaca Ammaanka ,wuxuuna Duullimaadyadii baaqday isbuucii hore ku tilmaamay sababo la xiriiray dhinaca Cimiladda, iyo in la fariisiyey tiro ka mid ah Duullimaadii u qorsheysnaa Shirkadda Turkish Airlines oo uusan cadadkeeda sheegin.
DHAGAYSO:Barnaamijkii Caawa iyo Daljir iyo Wariye Jamal